भन्ने हो मा पोस्ट?
पोस्ट मा के छ? यो प्रश्न उहाँले गर्नुभयो कि अधिकांश मानिसहरू फिक्री छ। यो लामो पोस्ट पूरा जो निस्तार। इस्टर अप्रिल अन्तिम आइतबार पूरा। तर सबै माथि, यो भोजन नगर्दा, सामना गर्न सक्षम छ जो हरेक व्यक्ति एक लामो र भीषण प्रक्रिया द्वारा preceded छ। लगातार मान्छे मात्र अन्त गर्न सबै बाटो हिंड्न।
यस्तो असफलता को मुख्य महत्व प्राण र मानव शरीर शुद्ध छ। यो 48 दिन जस्तै, यो शरीर toxins को एक किसिम को शुद्ध गर्न सकिन्छ विश्वास छ यस्तो लामो अवधि लागि हो। तर Lent सबैभन्दा गम्भीर हप्ता पहिलो र अन्तिम हप्ता हुन मानिन्छ। प्रत्येक बिन्दुमा को स्थिति छैन के निर्णय सजिलो छैन। उपवास रोटी, तरकारी, फलफूल, मह, मटर, पागल को एक किसिम खान अनुमति दिएको छ, जबकि। मासु लागि, यो यी यो दिनमा बचा गर्नुपर्छ। सप्ताहन्तमा मा, एक सानो रातो रक्सी पिउन। तसर्थ, पोस्ट मा xerophagy स्वागत गर्न छ। त्यो छ, हामी गर्मी उपचार छैन गरिएका खाद्य पदार्थ खान सक्छ। यसलाई हामी माथि सूचीबद्ध गरेको हुन सक्छ। तातो पेय छैन त्यस्तो अहानिकारक चिया, कफी, रस रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। मात्र पानी र रस स्वागत छ।
पहिलो पोस्ट मा के छ? पहिलो पाठ्यक्रम अनुमति को, सूप, माछा सूप त्यहाँ अचार। हामी अनाज कुरा भने, खाना मात्र अनाज र दलिया खपत गर्न सकिन्छ। को उपवास को उत्सव प्रत्येक व्यक्ति को लागि एक निजी कुरा हो। का पोस्ट मा खाएको गर्न सकिन्छ भनेर पहिलो पकवान बारेमा थप कुरा गरौं। यो मुख्यतया विभिन्न छ meatless सूप, जहाँ यी सूप प्याज र गाजर तलना स्वाद दिन आवश्यक छ। पनि एड मरिच स्वाद दिनुभयो। पहिलो पकवान अझ बढी सन्तोषजनक थियो, तपाईं उदाहरण चामल वा जौ को लागि, अनाज को प्रशस्त थप्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईं धेरै सुखद हुनेछ, त्यहाँ एक सम्पूर्ण छ Lenten खाना। पनि आदर्श सेम सूप, मशरूम, मटर र कुम्मैत सूप। हामी दोस्रो मा भाँडा कुरा भने उत्पादनहरु को अनुमति दायरा सानो व्यापक हुनेछ। पहिलो सबै, यो गरेको तारेको आलु, जो गर्न सकिँदैन धेरै स्वादिष्ट गर्न कुक लिइरहेको मा विचार सबै नियम को उपवास। Lent समयमा आलु बस मुख्य पकवान छलफल। आलु (दूध निषेधित छ रूपमा, तर केवल पानी मा) यो मसले गर्नुपर्छ कि आलु, विभिन्न तरिकामा पकाएको गर्न सकिन्छ, फ्राइज आलु बनाइएका बर्गर। आलु थपियो मटर, सिमी, वा मकै एउटा स्वाद को लागि। तरकारी ragout र solyanka पनि Lent समयमा खाएको हुन दिनुभयो। यसबाहेक कुनै पनि पकवान, तपाईं पहिले नै एकदम थकित, तपाईं एक स्वादिष्ट र हार्दिक, पागल वा तरकारी को एक किसिम थप्दा बनाउन सक्छ भन्ने तथ्यलाई। स्थिर तरकारी पनि स्वागत छ। ब्रोकोली र ब्रसेल्स राम्रो पतला कुनै पनि पकवान अंकुरित। हामी तपाईंलाई खान र छिटो समयमा पिउन गर्न सक्ने मिठाईहरू कुरा भने, यो फरक फल पेय, रस र जेली हुन सक्छ।
मिठाई को स्थिति मा के छ? तपाईं मिठाई चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले एक गाजर-स्याउ सस, वा अरूको विभिन्न बनाउन सक्छ। यसरी, नास्ता लागि गर्दा तपाईं आफ्नो muesli बनाउन सक्छ व्रत। तिनीहरूले tastier छन्, तपाईं तिनीहरूलाई रस मा बनाउन सक्छ। खाना रूपमा कार्यरत पटाखे, सुकाउने, Bagels, बीउ, सुकेको फल, जाम र तरकारी सलाद को एक किसिम संग सकिन्छ। गर्भवती महिला, छोराछोरी, वृद्ध र बिरामी मान्छे व्रत लागि जाँदा, त्यहाँ मांग नरम छ। उनीहरू त्यहाँ मासु, माछा र दुग्ध व्यञ्जन हो, अनुमति छ। उपवास को समयमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यो तपाईं dieting कसरी र तपाईंले यसलाई के महसुस छैन। माथिका सबै, Lent छ चाहनुभएको द्वारा मानिसको नम्रता अघि परमेश्वर, जो सीमित छैन मात्र खाना, तर पनि थप उपवास र आध्यात्मिक। उपवास को विचार अनुसार प्रार्थना र Penance को एक किसिम सँगसँगै हुनुपर्छ। किनभने, बिना यो एक सामान्य स्थिति भीषण आहार, कुनै पनि शुद्धि छैन बोक्न गर्छ, जो मा खोल्दै। म अब त्यहाँ पोस्ट मा छ र हाम्रो जीवनमा व्रत महत्त्व छ भनेर थाहा आशा।
मासु संग मसालेदार बन्दागोभी
कसरी3मिनेट लागि माइक्रोवेव मा एक केक खाना पकाउनु?
यस पट यो स्वादिष्ट माछा
Aktash विफलता कहाँ?
आफैलाई एक सुन्दर कर्ल कसरी बनाउने
रोम बलूत: गायक र ब्लगर को एक जीवनी
"Kaprelsa", 300 मिलीग्राम, (vandetanib) मूल्य analogues। "Kaprelsa" सस्ता कहाँ किन्न?
"सही Triholodzhik": प्रयोगको लागि समीक्षा र निर्देशन